A Way of Thinking – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 28 March 2010 28 March 2010 Categories Reproduction, Thoughts
8 thoughts on “A Way of Thinking”
29 March 2010 at 12:22 am
thinking about that,what character?
29 March 2010 at 10:44 am
ဘာသာပြန်ကြည့်တယ်။ “အဲဒါအကြောင်း စဉ်းစားရင်း ဘာဇာတ်ကောင်/ဘာစရိုက်လဲ”လို့ အနက်ထွက်လာပါတယ်။ နားမလည်ပါ။ ဘာကို ပြောချင်မှန်းလည်း မသိပါ။ မြန်မာလိုလေး ရေးပေးသွားရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။
Saya, Just my humble opinion. I think there isasarcasm in your feedback to his/her comment. It may be more positive to reply him/her like: “I don’t understand what you mean. Pls rephrase your comment or write it in Myanmar”.
Thank you very much indeed, Saya Aung Aung, for your valuable advice. They say “sarcasm is the lowest form of wit” and I have to admit I have that habit of badmouthing. I will takeaserious note of your kind comment and behave myself in future responses. And I have also rephrased my comment.
ဟုတ်တယ် ဆရာရေ … သေတဲ့လူက ပြန်ရှင်လာမှမဟုတ်တာ။ ငိုနေလဲ အပိုပါပဲ။
အဖိုး (အမေ့အဖေ) သေတုန်းက အမေက လူမြင်သူမြင် ငိုပြမနေဘူး။ လုပ်စရာရှိတာ အကုန်စီမံပြီး လုပ်သွားတယ်။
အမေ့အမကြီးကတော့ လှလှပပလေး ပြင်ဆင်ပြီး ပြောငိုကလေး ငိုတာ။ ငိုရင်းနဲ့ သူ့ကို ဘယ်သူတွေ ကြည့်နေလဲဆိုတာ ချောင်းပြီး အကဲခတ်သေးတယ်။ မသိတဲ့ လူတွေကတော့ သူ့ကို ၀ိုင်းသနားလို့။
နောက် အဖိုး (အဖေ့အဖေ) သေတုန်းကလဲ အဒေါ်ဖြစ်သူက ဓာတ်ပုံထဲမှာ သူငိုတာပါအောင် ချိန်ပြီးငိုတာ မြင်ဖူးသေးတယ်။
အဲဒီလိုတွေ မြင်ရတော့ ကျမစိတ်ထဲ ကလိကလိဖြစ်ပြီး စာတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ (လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ် အနှစ် ၂၀ လောက်ကပါ)
ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့။
မိဘ ဘိုးဘွားတွေ ဇနီး ခင်ပွန်းတွေ သေလို့ ငိုကြ ယိုကြတာဟာ သေသူအတွက်လား၊ ရှင်သူအတွက်လား စဉ်းစားမိလို့ပါ။
တကယ်တော့ သေတဲ့လူက သေပြီပဲ။ သေမှ ငိုနေတာထက် မသေခင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေကြဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
အဖေက ကျမတို့ ငယ်ငယ်ထဲက နိပါတ်တော်ထဲက ပုံပြင်လေးပြောပြပြီးမှာထားတယ်။
မိသားစုတစုမှာ မိသားစုဝင်တယောက် သေတာကို ပူဆွေးငိုကြွေးမနေဘဲ အလောင်းကို မီးရှို့နေလို့ သိကြားမင်းက လာမေးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေ။ ဆရာသိမှာပါ။ အဲဒါကိုပြောပြီးတော့ အဖေသေရင် မငိုနဲ့လို့ မှာထားတယ်။
အမေကတော့ ငါသေရင် အလုပ်ရှုပ်တာတွေ လုပ်မနေနဲ့တဲ့။ အသုဘချက်ချင်းသာချလိုက်လို့ ပြောတယ်။
မသေခင်မှာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကောင်းမှုတွေ ပြည့်စုံပြီးသားဆိုရင် သေသွားလဲ သေသူအတွက် ၀မ်းနည်းဖို့ မလိုပါဘူး … လို့ ကျမကတော့ ထင်မိပါတယ်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှု မပြည့်မစုံဘဲ သေသွားခဲ့ရင်လဲ ကျန်ရစ်သူတွေက သေသူအတွက် ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုတွေပြု အမျှဝေပေးဖို့ပါပဲ။ ပူဆွေးသောက ရောက်နေတာက အလကား အကျိုးမရှိဘူးလို့ ကျမလဲ မြင်မိပါကြောင်း ဆရာရေ …။ (မမန့်တာကြာလို့ ရှည်လျားစွာ မန့်သွားပါတယ်။ သည်းခံပါနော်)
ဘကြီး….ကောင်းလိုက်တဲ့တွေးပေါက်…ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းနာရေးမှာ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် နေတော့ အသက်ပြန်မရှင်လာနိုင်ပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောခံ ရမှာတော့ သေချာတယ်…တူမကြားဖူးတာက နာရေးအိမ်က လူတွေ သနပ်ခါး တောင် မလိမ်းရဘူးဆိုပဲ။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတာတို့ သနပ်ခါး လိမ်းတာ တို့လုပ်ရင် အဲ့ဒီလူသေတာကို ပျော်နေတယ် လို့ယူဆကြတယ် လို့ဆိုပဲ .. .. တူမသဘောကလဲ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဘယ်သူ့ကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုမလဲနော်…
ကျွန်မကတော့အားရပါးရငိုလိုက်ရမှရင်ထဲပေါ့သွားတော့တယ်.. မြင်နေကျပြုစုနေကျ ဘိုးဘွား မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကရင်ကိုဆို့လာတယ်..
စိတ်မရှိပါဘူးဗျာ။ ငိုတာလည်း အရသာတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ငိုဖူးပါတယ်။ မေမေ ဆုံးတုံးက ချက်ချင်း မငိုမိသေးဘူး။ အစစ ဟန်မပျက် လုပ်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ ညဘက် တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့အချိန်ကျမှ ခြုံးချပြီး ငိုလိုက်တာပါ။ ယနေ့ထက်တိုင်လည်း မေမေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးမိတိုင်း မျက်ရည်ဝိုင်းဆဲပါ။ လူမြင်ကောင်းအောင် ဟန်များပြီး သည်းပြနေတာကိုသာ ကျွန်တော် ပြောနေတာပါ။ ခံစားချက်ကတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ရင်ထဲမှာ ရှိကြမှာပေါ့။ ခံစားချက်အမှန်နဲ့ သူ့အလိုလိုဖြစ်သွားသမျှလည်း နားလည်ပေးနိုင်ကြမှာပါ။
ကျွန်တော်က ကြောင်သေတာတောင် ငိုဖူးတဲ့သူခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကြောင်လေးက Romeo တဲ့။ သူသေတော့ ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းမှာ သွားမြှုပ်တယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့။ မြို့ထဲကနေ ကန်တော်ကြီးစောင်း ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းကို သယ်သွားရင်း အသွားရော အပြန်ရော မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးဗျို့။ မမ၀၀ ပြောတဲ့ လွတ်လပ်စွာ စွဲလန်းပိုင်ခွင့်ဆိုတာထက် လွတ်လပ်စွာ လှစ်ဟထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့် (Freedom of Expression) ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Previous Previous post: Mandalay FM Broadcast 3
Next Next post: Does Your Mind Really Belong to You?